ARCHIVE, BANKING, POWER NEWS » गण्डकी बिकास बैंकको लापरवाहीको पराकाष्टा ! चार्टड एकाउन्टेन्टहरुकै 'मानहानी' हुनेगरी निकालियो 'थर्ड-क्लास' सूचना !
काठमाडौँ - गण्डकी बिकास बैंकले चार्टड एकाउन्टेन्ट (सिए) हरुको बेइज्जत गर्ने प्रयास गरेको छ । बैंकले विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित 'भ्याकेन्सी' को सुचनामा सिएहरुको बेइज्जत गरेको हो । बैंकले सिएका बारेमा जानकारी नै नभएको जसरी भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट छाप्दा गल्तीको पराकाष्टानै देखिएको छ ।
बैंकले एक सुचना जारी गर्दै बैंकका लागि २ जना चार्टड एकाउन्टेन्ट (सिए) मागेको छ । र सिएको पदका लागि उसले अनिवार्य रुपमा ३ बर्षको आर्टिकलशिप गरेको हुनुपर्ने भन्ने हास्यास्पद कुरा उल्लेख गरेको छ । किन भने ३ वर्षको आर्टिकलशिप नगरी कोहि पनि सिए हुन सक्दैन । यो त सरासर माष्टर्स गरेको मान्छे चाहियो तर ब्याचलरचाहिं पास गरेको हुनुपर्छ भने जस्तै हो ।